पाल्पाको रानिमहलमा प्रेमजोडी - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home प्रदेश प्रदेश ३ पाल्पाको रानिमहलमा प्रेमजोडी
पाल्पा । आज प्रणयव दिवस यस क्षेत्रका प्रेम जोडिहरुलाई पाल्पाको रानीमहल दरबार एक गन्तव्य बनेको छ । प्रेमको पहिचान दिने दरबार भएकाले प्रणय दिवसको अवसरमा जोडी सहित धुम्ने र रमाउने गर्दछन् ।
खड्ग शमशेरले राणाले आफ्नी रानी तेजकुमारीको सम्झनामा कालीगण्डकी किनारामा रानीमहल दरवार निर्माण गरेका थिए । रानीमहल दरबारमा प्रणय दिवसमा आन्तरिक र बाह्रय पर्यटक घुम्ने र रमाउने गरेका छन् । ‘रानीमहल एक पटक घुम्न पर्ने स्थान भनेर सुनेको थिएँ त्यही कारण प्रणय दिवस पारेर घुम्न आएँ । रमाइलो अनुभुति भएको छ’ चितवनबाट घुम्न पुगेका जोडी अन्जन र अनिता राउतले भने ।
राणा खड्ग शमशेरले वि.स. १९४९ सालमा रानीमहलको निर्माण शुरु गरेका थिए भने वि.स. १९५५ मा पुरा भएको थियो । मोटरसाइकल लगायत अन्य सवारीवाट सहजै रानी महल पुग्न सकिन्छ । राती क्यामफायर गर्ने र नदि किनारका टेन्टमा रात बिताउनेहरु पनि धेरै भेटिन्छन् ।
वेलायती दरवार शैलीमा निर्माण गरिएको रानीमहल सम्म तानसेनबाट सवारी साधानमा ४५ मिनेटमा पुग्न सकिन्छ । करिब ११ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको रानीमहल दरवारमा २४ कोठा रहेका छन् । शिबलाय, पानीपोखरी, शिबलिङ्गमा गुम्वज आकारका झ्यालहरु सहित आर्कषित कलाकृतिहरु देख्न सकिन्छ । ऐतिहासिक रानीमहल रमाइलो वातावरण, उत्तरवाहिनीसंगै चिटिक्क दरबार रहेकाले धेरैको मन लोभ्याउने गरेको पोखराबाट घुम्न पुगेका सूर्य बहादुर कार्कीले बताए । यहॉ सडकको स्तर उन्नती र दरबार क्षेत्रलाई अझै व्यवस्थित गर्ने सकेमा पाल्पाको पर्यटन विकासमा रानीमहल दरबार महत्वपूर्ण गन्तव्य बन्न सक्दछ ।
रासस - May 31, 2020
काठमाडौँ । नेपालमा पश्चिमी तथा स्थानीय वायुको प्रभाव रहेकाले बदलीसँगै आज वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका मौसमविद् मीनकुमार आर्यालले ती मौसमी...
सरिता दाहाल - February 17, 2020
मकवानपुर । नोबल कोरोना भाइरसविरुद्ध उच्च सतर्कता अपनाउने सिलसिलामा बागमति प्रदेश सरकारले मकवानपुर र चितवनको दुईवटा सरकारी अस्पतालनमा सुविधा सम्पन्न आइसोलेशन वार्ड...
दिनहुँ अन्तर्राष्ट्रिय उडान चार्टर
Editor-Picks निराजन पौडेल - April 12, 2020
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको महामारी फैलिएसँगै नेपालमा रहेका ३ हजार २ सयभन्दा बढी विदेशी नागरिक आफ्नै देश फर्किएका छन् ।...
पूर्णभक्त दुवाल - November 26, 2020